Yakavanzika Policy - Iyo UnCommission
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa: Gumiguru 5, 2021
Iyi yekuvanzika mutemo ("Yakavanzika Policy") inoshanda kune mawebhusaiti e100Kin10, chirongwa chinotsigirwa nemari neTides Center, yeCalifornia isingabatsiri yeruzhinji inobatsira mubatanidzwa ("isu," "isu," "vedu"), iri pa https: / /100kin10.org, https://uncommission.org, https://grandchallenges.100kin10.org, uye https://www.starfishinstitute.org (iyo "Webhusaiti").
Kuvanzika kwako kwakakosha kwatiri. Iyi Yakavanzika Policy inotsanangura ruzivo rwatinogona kutora kubva kwauri kana iwe rwaunogona kupa kana iwe uchishanyira maWebhu uye maitiro edu ekuunganidza, kushandisa, kuchengetedza, kuchengetedza, uye kuburitsa ruzivo. Iyi Yakavanzika Mutemo inoshanda kune ruzivo a) iwe unogona kutipa isu nekuzvidira kana iwe uchishanyira maWebsite; b) tinogona kuunganidza otomatiki paunoshanyira maWebhu; uye c) kuti isu titore kubva kune vatatu mapato uye kumwe kunowanikwa.
Ndokumbira uverenge iyi Yakavanzika Policy usati washandisa iyo Webhusaiti. Nekushanyira Webhusaiti kana kutipa ruzivo kwatiri kuburikidza neWebhusaiti, uri kubvuma zvirevo zveChakavanzika Policy pamwe neyedu. Mitemo uye Mamiriro Okushandisa. Mune mamwe mazwi, kana iwe usingabvumirane neChakavanzika Policy iyi, haufanirwe kushandisa mawebhusaiti.
Iwe haudiwe kuti upe chero ruzivo rwemunhu kuti ushanyire mawebhusaiti. Nekudaro, isu tinogona kuunganidza ruzivo kubva uye nezve vashanyi kumaWebsite. Ruzivo urwu runogona kukuzivisa iwe pachako sezita, email kero nhamba yefoni, kero yekutumira, huwandu hwevanhu, uye rumwe ruzivo rwakafanana ("Ruzivo rweMunhu"). Isu tinounganidza Ruzivo rweMunhu uye rumwe ruzivo nenzira mbiri: 1) iwe unotipa icho nekuzvidira; uye 2) otomatiki paunoshanyira mawebhusaiti edu.
Mashoko Aunotipa Kwatiri: Iwe unogona kusarudza kuendesa Rako Ruzivo Rwedu kwatiri nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Mienzaniso inosanganisira: kunyorera tsamba dzetsamba kubva kwatiri; kusaina kuti tigamuchire ruzivo nezve redu basa, zvirongwa, zvirongwa, kana zviitiko; kuzadza "Taura nesu" kana imwe fomu yepamhepo kubvunza mubvunzo kana kukumbira ruzivo; kutaurirana nesu kuburikidza neemail. Kana iwe uchida kugadzirisa kana kudzima iyo ruzivo iwe yawakatipa kwatiri, ndapota nyorera info@tides.org uye info@100Kin10.org.
Ruzivo Runotorwa Rwoga: Ichi chikamu cheruzivo chinosanganisira Internet Protocol ("IP") kero yekombuta kana chishandiso chaunoshandisa kuwana maWebhu; kero yeinternet yenzvimbo iyo iwe yawakabatana neiyo mawebhusaiti; uye zvinongedzo zvaunotevera kubva kuWebhusaiti.
Cookies neTechnologies dzakafanana:Ruzivo Rwakaunganidzwa Rwoga ”inosanganisirawo ruzivo rwunounganidzwa kuburikidza nebrowser cookies kana humwe hutekinoroji hwekutevera. Cookies idiki dhata mafaira akaiswa pakombuta yako paunoshanyira saiti. Cookies anoshanda akasiyana zvinangwa, sekutibatsira kuti tinzwisise mashandisiro anoita saiti yedu, kukurega uchifamba pakati pemapeji zvakanaka, uchirangarira zvaunofarira, uye kazhinji uchivandudza ruzivo rwako rwekubhurawuza. Cookies haisi iyo chete nzira yekutevera vashanyi kune webhusaiti. Tinogona zvakare kushandisa tudiki mafaera emafaira ane akasarudzika ekuzivikanwa anonzi mabheoni (uye zvakare "pixels" kana "clear gifs") kuziva kana mumwe munhu akashanyira masayiti edu.Nekushandisa iyo yakakodzera marongero pane yedu browser, unogona kusarudza kusatambira makuki. Nekudaro, ndapota cherekedza kuti kana iwe ukaita iyi sarudzo, unogona kutadza kuwana zvimwe zvikamu zveWebsite. Kana iwe ukashandisa iyo browser bhurawuza iyo inobvumidza iwe kuti ugamuchire makuki, iwe unobvuma kushandisa kwedu makuki. Zvakare, ziva kuti mamwe easina-kuki ekuteedzera matekinoroji anowanzoenderana nemakuki kuti ashande nemazvo, saka kuremadza makuki kunogona kukanganisa mashandiro avo. Mamwe mabhurawuza eInternet anogona kugadzirirwa kutumira "Usateedzere" masaini kumasevhisi epamhepo aunoshanyira. Isu parizvino hatidi kupindura "Usatevera" kana zvakafanana zviratidzo. Kuti uwane zvimwe nezve "Usateedzere," ndapota shanya http://www.allaboutdnt.com.
Ruzivo Ratinowana Kubva kune Vamwe: We vanogona kugamuchira Ruzivo rweMunhu pamusoro pako kubva kune zvimwe zviwanikwa, zvinosanganisira sangano rako kana kambani, vamwe vanofunga kuti ungafarire basa redu, masosi anowanikwa pachena, uye vechitatu-bato analytics vanopa. Semuenzaniso, tinogona kugamuchira Ruzivo Rwako kana mumwe munhu kusangano rako akakugadza semunhu wekubata musangano iro.
Kushandisa Kwedu Ruzivo Rwako
Tinogona kushandisa ruzivo rwatinotora kuti tiite zvinotevera:
Kutaurirana newe, kusanganisira kupindura kumibvunzo yako uye zvikumbiro.
Shanda, chengetedza, maneja, uye gadziridza mawebhusaiti.
Fambisa tsvagurudzo uye analytics zvine chekuita nevashandisi veMawebhusaiti nemaitiro ekushandisa.
Kutaurirana newe nezve shanduko kuWebhusaiti kana Yakavanzika Policy, kana tichidikanwa kuti tidaro.
Gadzira yakaunganidzwa uye imwe data isingazivikanwe kubva kune ruzivo rwevashandisi vedu asi isingabatanidzwe nechero Ruzivo rweMunhu, iyo yatingagovane nevechitatu mapato zvebhizinesi zviri pamutemo.
Dzivirira maWebhusaiti, kusanganisira kuona, kuongorora, uye kudzivirira zviitiko zvinogona kutyora mirau kana mutemo wedu.
Teerera nemutemo. Tinogona kushandisa Ruzivo Rwako Pachedu sezvatinotenda zvakakodzera (a) kutevedzera zvinoshanda mitemo, zvikumbiro zviri pamutemo uye maitiro epamutemo, senge kupindura kumisangano kana zvikumbiro kubva kuzviremera zvehurumende; uye (b) panotenderwa nemutemo zvine chekuita nekuferefeta zviri pamutemo.
Wana mvumo yako. Mune zvimwe zviitiko tinogona kukumbira mvumo yako kuti utore, ushandise kana kugovana Ruzivo rwako pachako nenzira isina kuvharwa nePurisiti Yakavanzika. Mumamiriro ezvinhu akadaro, tinokukumbira "kusarudza" kushandisa kwakadaro.
Nzira dzatinogovana Ruzivo Rwako Pachako
Tinogona kuburitsa Ruzivo Rwako Pachedu kuzvinhu zvine hukama seTides Foundation kana Tides Network kana kune vechitatu-bato rebasa vatapi vatinoshanda navo kuti vatibatsire kushandisa maWebhu uye kuitisa zviitiko isu. Enzaniso dzinosanganisira kuitirwa mawebhusaiti edu, portal kana imwe chikuva, ruzivo rwetekinoroji ruzivo, uye manejimendi data. Kana ava vanopa rubatsiro rwechitatu-bato vachikwanisa kuwana Ruzivo Rwako, vanofanirwa kuchengetedza kuvanzika kweruzivo uye kurushandisa chete kune zvakaringana chinangwa icho chakapihwa.
Tinogona kushandisa kana kuburitsa Ruzivo Rwako Pachedu sezvatinoona zvakakodzera pasi pemitemo inoshanda; kupindura kune zvikumbiro kubva kuruzhinji, hurumende, uye masimba ekutonga; kutevedzera zvakatemwa nedare, nzira dzekumhan'ara, uye mamwe maitiro, kuwana mishonga zviri pamutemo kana kudzikisira kukuvara kwedu; uye kuchengetedza kodzero, chengetedzo, kana chivakwa chevashandi vedu, iwe kana vamwe.
Tinogona kuchinjisa kana neimwe nzira kugovera Rwako Rwako maererano nekubatana, kutora, kana kumwe kutengesa kana kuchinjisa zvinhu, zvichiteerana nezvinodiwa zvakavanzika, uye nekukuzivisa kana zvichidikanwa nemutemo.
Kuchengetedzwa kweRuzivo Rwako kwakakosha kwatiri. Isu tinotora akati wandei emasangano, ehunyanzvi uye epanyama matanho akagadzirirwa kuchengetedza Ruzivo rweMunhu isu rwatinotora. Nekudaro, njodzi yekuchengetedza inowanikwa mune rese internet uye ruzivo matekinoroji, uye isu hatigone kuvimbisa kuchengetedzeka kwakazara kweRuzivo Rwako. Isu tichaenderana nemitemo inoshanda nemirau inoda kuti isu tikutaurire iwe kana iwe Ruzivo Rwako Rukakanganiswa nekuda kwekutyora kwedu kwekuchengetedza matanho.
Isu tinochengeta Ruzivo Rwako kwenguva yakareba sezvazvinodiwa kuti tiite zvido zvedu zvinoenderana nePezvakavanzika izvi, mapurisa edu ekuchengetedza, nemutemo unoshanda.
Kune yako ruzivo uye nyore, aya mawebhusaiti anogona kunge aine zvinongedzo kune vechitatu-bato saiti. Aya mawebhusaiti echitatu-bato haasi pasi pedu uye anotongwa nemaitiro avo epachivande uye nemashandisirwo. Uye zvakare, yechitatu-bato zvinongedzo hazviratidze kubatana ne, kutsigira kana kutsigira nesu chero yeiyo yakabatanidzwa-kune saiti.
Kuteerana neVana Online Yekuchengetedza Dziviriro Mutemo
Kuchengetedza kuvanzika kwevana vadiki kwakanyanya kukosha. Nechikonzero ichocho, isu hatizi kuunganidza ruzivo kuWebhusaiti kubva kune avo vatinoziva vari pasi pemakore gumi nematanhatu. Uyezve, hapana chikamu chemawebhusaiti chakarongedzwa chaizvo kukwezva chero munhu ari pasi pemakore gumi nematanhatu. ichakurumidza kudzima ruzivo.
Panogona kunge paine maforamu pamawebsite edu ayo, nekuda kwechimiro cheforamu uye kugona kwemaWebhu edu, zvinosanganisira yambiro yekuti ruzivo rwakapinda i "ruzivo rweveruzhinji." Ruzivo rwakadai rwunobatwa zvakasiyana nechinangwa cheiyi Yakavanzika Policy sehumwe ruzivo rwakatsanangurwa pano. Kana isu tikashandisa chirevo ruzivo rweveruzhinji, isu tinoreva kuti iwo ruzivo rwunogona kutariswa pachena kana kuvhara maWebhusaiti edu.
Nekuisa ruzivo rwako muzvikamu zveWebhusaiti yedu zvinonyevera kuti ruzivo rwakapinda richava ruzivo rweveruzhinji, uri kubvuma kuti isu hativimbise kuti ruzivo rwakadai rucharamba rwakavanzika; uyezve, iwe uri kubvuma kuti isu hatina mhaka yekuzivisa chero ruzivo rwemunhu uye chero zvirevo zviri pamutemo zvine chekuita nazvo. Chokwadi, nekuti isu hatisi kuvimbisa kuti ruzivo rwakadai rucharamba rwakavanzika, iwe unofanirwa kutarisira kuti chero munhu, kusanganisira vanhu vasipo pamawebhusaiti edu, achakwanisa kuzviona.
California Zvakavanzika Kodzero
Kana iwe uchigara muCalifornia uye wakapa ruzivo rwunozvizivisa kwatiri, unogona kukumbira ruzivo kamwe pagore rekarenda nezve zvatinozivisa zvimwe zvezvikamu zvemashoko ako anozivikanwa kune vechitatu mapato nekuda kwavo kwekushambadzira. Zvikumbiro zvakadaro zvinofanirwa kuendeswa kumaTides pa info@tides.org.
Ruzivo rweVashandisi Kunze kweUnited States
Aya mawebhusaiti anodhindwa muUnited States uye pasi pemitemo yeUnited States. Kana iwe uri mugari weEU kana mugari, iwe une mamwe marongero ane chekuita neRuzivo Rwako maererano neGeneral Data Protection Regulation ("GDPR"), kusanganisira kodzero yekukumbira kopi yeRuzivo Rwako Rwatinogona kuva narwo. kodzero yekukumbira kuti tivandudze, kudzima kana kusazivisa iwo ruzivo. Kana iwe uine chero GDPR-yakatarwa mibvunzo kana zvikumbiro, ndapota bata Tides pa GDPR@tides.org.
Shanduko kuMutemo Wedu
Tinogona kudzokorora ino Yakavanzika Policy chero nguva. Kana tadaro, isu tinoshandura iyo "Yekupedzisira Kuvandudzwa" zuva kumusoro kwepeji rino. Tinokukurudzira kuti utarise kumashure kazhinji kuti ugare up-to-date pane chero shanduko kune Yakavanzika Policy. Kuenderera kwako nekushandisa maWebhusaiti mushure mekunge tatumira shanduko zvinoreva kuti unobvumirana neshanduko idzodzo.
Kana iwe uine chero mibvunzo kana makomendi nezve ino Chakavanzika Policy kana chero chinhu chine chekuita nemaWebhusaiti, ndapota nyorera Tides pa info@tides.org. GDPR-yakatarwa mibvunzo uye zvikumbiro zviri nani kuendeswa GDPR@tides.org.